Kodiarana | January 2022
Tena > Kodiarana
kodiarana familiana bisikileta eny an-dalana
Kodiarana famaky kodiarana bisikilety - mety vahaolana
Ianao ve mila kodiarana manokana ho an'ny frein disc? Raha te hampiasa frein disc dia mila habe kodiarana hafa ianao fa tsy amin'ny kodiarana mahazatra.
kodiarana aero mendrika izany
Mendrika ve ny kodiarana aero - mamaly ireo fanontaniana
Ny kodiarana aero dia tsara amin'ny fiakarana? Amin'ny farany, raha toa ny lanjan'ny aerodynamika rehefa miakatra, raha mitaingina arabe fisaka ianao, na faritra mihodinkodina na eny an-tendrombohitra aza misy lalana lava be, dia mety ho zava-dehibe kokoa ny aerodynamika mandritra ny dia. 30 2017.
ahoana ny fanaovana kodiarana bisikileta
Ahoana ny fanaovana kodiarana bisikileta - vahaolana maharitra
Inona no atao amin'ny kodiarana bisikileta? Fananganana. Ny kodiarana bisikileta dia misy plastika vita amin'ny kodiarana vita amin'ny kodiarana, antsoina koa hoe fatin'olona, ​​miaraka amina fingotra fanampiny, antsoina hoe tread, eo ambonin'izay mifandray amin'ny arabe. Raha ny an'ny clinchers, ny fonosana dia mamono vakana roa, iray isaky ny sisiny.
kodiarana bisikileta lafo indrindra
Kodiarana bisikileta lafo indrindra - vahaolana maharitra
Inona ny kodiarana bisikileta lafo indrindra? Ny kodiarana Gokiso avy ao amin'ny Kondo Machine dia voalaza fa kodiarana bisikileta mahomby indrindra eto an-tany ary miaraka amina vidiny mifanentana amin'ny fahombiazan'ny seta. Ny mpivady tsirairay dia mitentina 7 900 $.
Kodiarana Ffwd - ahoana no fomba hahatratrarana
Tsara ve ny kodiarana FFWD? Amin'ny ankapobeny, ny kodiarana FFWD RYOT44 dia tena tsara. Eny, afaka mividy mora vidy ianao, saingy ny kalitao eto dia tena ambony tampoka ary misongadina izany rehefa mitaingina ny arabe ianao: fampisehoana marobe ary ambaratonga fampiononana mendrika.
Kodiarana Ridley - ny mpitari-dalana farany
Tsara ve ny bisikileta Ridley? Mahafinaritra ny bisikileta Ridley. Vao nividy iray aho ary tena tiako. Ireo mpivarotra manary fako amin'ny marika hafa dia olona ratsy fotsiny. Afaka taona vitsivitsy aorian'ny fanovana marika, dia hanaparitaka ny bisikileta amidiny izy ireo anio.
inona ny kodiarana bisikileta tsy misy fantsona
Inona avy ireo kodiarana bisikileta tsy misy tubeless - ahoana no hamahana izany
Inona avy ireo tombony azo amin'ny kodiarana bisikileta tsy misy fantsona? Tombontsoa tsy misy rano Ny kodiarana dia azo aleha amin'ny fanerena ambany kokoa, manatsara ny fihenan-dàlana eny ivelan'ny arabe, tsy misy atahorana ny totohondry. Ny fanerena ambany dia midika fampiononana sy fampisehoana mihombo amin'ny sehatra misavoritaka (jereo ny cyclinguk.org/cycle/tyre-pressure). Ny fanoherana mihodina dia tokony ho ambany na dia amin'ny faritra malama aza. 28.01.2020
kodiarana tsy misy fantsona manokana
Misy kodiarana manokana ve tsy misy tubeless? Namboarina toy ny tsy misy hafa, mitaingina toa ny hafa. Ny kodiarana dia manandanja amin'ny Specialised. Ny tanjontsika dia tsy ny hampivelatra ny lamba tsy misy fantsona, fa ny LALAHIANA TALOHA, NY FITIAVANA bebe kokoa, ny fitantanana tsara kokoa, ary ny fametahana tena.
kodiarana niteny karbaona
Kodiarana niteny Carbon - vahaolana ho an'ny
Tsara ve ny mpitondra karbaona? Ny kabary karbona dia manome ny hamafiny avo kokoa sy ny fiainana reraka tsara kokoa raha oharina amin'ny mpitondra vy mahazatra, na eo aza ny lanjany ambany. Ny fibre karbonina dia fametrahana tsy mitongilana, manome 300 kgf ny fetin'ny mpandahateny. Izany dia nihoatra lavitra ny fihenjanana 125kgf izay amboarina matetika ny peratra karbonina.
kodiarana paris roubaix
Paris roubaix kodiarana - fanontaniana sy valiny voatanisa
Kodiarana inona no ampiasaina any Paris-Roubaix? Raha any Flanders ny ankamaroan'ny mpitaingin-tsoavaly dia misafidy kodiarana 25mm ny sakany, mavesatra kokoa ny kobalita any Paris-Roubaix ka ho hitantsika ny kodiarana 27 hatramin'ny 30mm ampiasain'ny ankamaroan'ny ekipa. Ny kodiarana amin'ity sakany ity dia tsy tafiditra amin'ny bisikileta hazakazaka mahazatra, na dia manomboka miova aza izany satria ny bisikileta hazakazaka sasany dia mahatratra 28mm ny kodiarana.
dt kodiarana lalana Swiss
Dt swiss track kodiarana - vahaolana pragmatika
Kodiarana DT Soisa Tsara ve? Izao no vakiany: 'Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, ny DT Swiss dia nanova ny tenany avy amina marika mpiorina amin'ny kodiarana malaza, miaraka amin'ny lazany tsara ho an'ny fahazavana, ny fahamendrehana ary ny faharetana, ho marika mitarika ho an'ny kodiarana rafitra be pitsiny sy mivoatra. . 2018.
Kodiarana Tcs - ahoana no fomba hiatrehana izany
Inona no dikan'ny TCS amin'ny sisin'ny bisikileta? TCS (Tubeless Compatible System) dia ny rafitra fantsom-batana / kodiarana tsy misy fantsom-batana natao hihaona amin'ny fenitra ETRTO iraisam-pirenena ary hahazoana antoka fa azo itokisana tanteraka.
kodiarana karbaona voalohany
Kodiarana karbonika voalohany - ahoana no hamahanao
Tsara ve ny kodiarana karbaona voalohany? Nanao dia an-tariby haingam-pandeha haingana izy ireo ary mitaingina terrain mifangaro amin'ny ankapobeny ary ny fahitako azy maharitra dia haingana sy mahazo aina tokoa. Ny freins dia iray amin'ireo zava-nisongadin'ireo kodiarana ireo. Rehefa ampiasaina amin'ny pads omena azy dia tena tsara ny herinaratra ary mifanaraka ihany koa izy io.
Kodiarana aotra - vahaolana amin'ny
Tsara ve ny kodiarana Cero? Nahavita nanangona 2000km + teo ambonin'ireto kodiarana ireto aho, izay ampy fotoana ampy hitarihana ahy amin'ny fehin-kevitra fa ity dia kodiarana tena tsara, azo atokisana ary mora ampiasaina. Ireo sisin-tany ireo dia afaka miala moramora eo anelanelan'ny lalana sy vatokely ary ny faritra eo anelanelany.1. 2020.
kodiarana vatokely ho an'ny bisikileta amin'ny arabe
Kodiarana gravel amin'ny bisikileta eny an-dàlana - vahaolana amin'ireo olana
Azonao atao ve ny mametraka kodiarana gravel amin'ny bisikileta eny an-dalana?
aiza no anaovana kodiarana zipp
Aiza no anaovana kodiarana zipp - ahoana no hamahanao
Ny kodiarana Zipp no ​​tsara indrindra? Ny Zipp 404 dia tsy isalasalana fa ny kintana kodiarana marika ary ankafizin'ny rehetra. Izy io dia maneho fifandanjana lehibe eo amin'ny aerodynamika, ny lanjany ambany ary ny kalitao tsara. Raha resaka triathletes sy bisikileta matotra, ny Zipp 404 dia azo lazaina ho fenitra volamena.19.02.2020
kodiarana aero zip
Kodiarana Zipp aero - fanontaniana sy valiny voatanisa
Mendrika ve izany ny kodiarana Zipp? Ny Zipp 404 dia, tsy misy fanontaniana, kodiarana aerodynamika mahazatra ary iray amin'ireo safidy ambony indrindra rehefa mitady tombony azo avy amin'ny aerodynamika ianao. Na dia tafiditra ao anatin'ny sokajy lafo vidy aza izy io, dia mendrika izany ny kalitaony sy ny endriny raha toa ianao ka matotra amin'ny fanavaozana ny aerodynamika matanjaka sy azo itokisana.
kodiarana orana amin'ny bisikileta
Kodiarana orana amin'ny bisikileta - vahaolana maharitra
Milamina ve ny mitaingina bisikileta rehefa orana? Ny mitaingina orana dia mampidi-doza kokoa noho ny mitaingina hain-tany maina noho ny antony mazava: malama rehefa lena. Malalaka kokoa ny arabe. Ny velarana voaloko sy ny sakana amin'ny vy dia toy ny ranomandry. Ela kokoa ny fijanonana ary mora kokoa ny mivoaka, noho izany mila vaky aloha sy maivana kokoa, indrindra amin'ny fidinana mando.01.09.2020
mametaka kodiarana tubular
Mametaka kodiarana tubular - valiny amin'ireo olana
Mila mametaka kodiarana tubular ve ianao? Amin'ny ankapobeny dia tokony hisy fametahana ampy hamatorana ny kodiarana sy ny sisiny fa tsy lakaoly be loatra. Ny tanjaky ny fatorana dia avy amin'ny sisiny ivelany amin'ny sisiny mihoatra ny afovoany. Raha kely loatra ny kodiarana amin'ny sisin'ny sisiny dia tsy hisy fifandraisana tsara amin'ny sisiny ivelany.
kodiarana bisikilety tsara indrindra
Kodiarana bisikileta tsara indrindra - vahaolana vaovao
Inona avy ireo kodiarana bisikileta tsara indrindra? Kodiarana bisikileta tsara indrindra ho an'ny toetrandro mafana kokoaVittoria Corsa G2. 0 TLR. Kodiarana an-dalambe Pirelli PZero Velo. Kodiarana bisikileta tsara indrindra ho an'ny tanananao. Schwalbe Pro One. Kodiarana bisikileta tsara indrindra ho an'ny habe marobe. Continental GP 5000. Cotton Turbo manokana. Fanamby Elite XP. Goodyear Eagle F1 Tubeless feno. Roubaix Pro manam-pahaizana manokana.6. 2021.